Hurumende yaVaEmmerson Mnangagwa yasvitsa mazuva zana iri muhofisi, vanhu vakawanda vachipa maonero akasiyana siyana.
Mukuru wesangano re#This Constitution Our Constitution, Muzvare Abigale Mupambi, vanoti chinhu chikuru chavanoona chaitika muhurumende yaVaMnangagwa, kugadzirika kwehukama pakati pemapurisa neveruzhinji.
Asi vanoti pane zvakawanda zvinosanganisira kuvandudza mitemo inobatsira kuve nehutongi hwejekerere pamwe nekugadzirisa hupfumi hwenyika, izvo VaMnangagwa vari kungotaura chete pasina zvinobatika zviri kuitwa.
Vanotiwo VaMnangagwa vari kuratidza kuti ishiri ine muririro wayo sezvo vasiri kurasa tsika dzakaipa dzagara dzichiitwa nebato ravo reZanu PF kusanganisira kunyomba vemapato anopikisa.
Mukuru wesangano rePlatform for Youth in Development, VaClaris Madhuku, vanotsigira maonero ekuti kunyange hazvo VaMnangagwa vakavimbisa uye vari kuramba vachitaura kuti vanoda sarudzo dzakachena, hapana zvinobatika zvavari kuita kuti izvi zvive zvichaitika.
Vanotiwo nekuda kwekuti VaMnangagwa vakapinda pahutungamiri vachibatsirwa nemauto, vanoona sekuti munyaya dzezvematongerwo enyika, hururmende yavo ichiri kuita hutongi hwechisimba sezvaingoitika muhurumende yaiva yaVaRobert MUgabe.
Mutapi wenhau anoshanda kazvimirira ega, Thelma Chikwanha, anoti kusvika pari zvino munyaya dzezvehupfumi, veruzhinji havanganyanyo gunun’una pamashandiro aVaMnangagwa sezvo vari kuedza kugadzirisa hukama nenyika dzekumadokero idzo dzange dzave makara asiwonani neZimbabwe.
Chikwanha anoti panyaya yehuwori, uho vakapika kuti vacharwisa zvachose, VaMnangagwa vari kukundikana nekuda kwekuti bato ravo reZanu PF rine nhoroondo yekusave nehanya nekugadzirisa dambudziko iri.
Mudzidzisi paUniversity of Pretoria muSouth Africa, VaTyanai Masiya, vanotiwo hurumende yaVaMnangagwa haisi kugadzirisa nyaya yehuwori nenzira inotarisirwa.
Vanoti veruzhinji havana chivimbo navo panyaya iyi sezvo ivo VaMnangagwa nevamwe vakuru vakuru vari muhurumende yavo, vachionekwawo sevanhu vane huwori.
VaMasiya vanotiwo zvisinei nezvakawanda zviri kutaurwa pamusoro pekugadzirisa hukama nedzimwe nyika uye kukwezva vemabhzimisi vekunze kuti vasime mari munyika, hapana zvinobatika zvati zvaitika.
Vanoti hururmende inofanirwa kungwarira kuti kudyidzana kwairi kuda kuita nedzimwe nyika, hakuzosiye zviwanikwa zvemunyika zvapedzwa pasina chabuda.
Vakambove mutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce, uye vari muzvinabhzizimisi, VaTrust Chikohora, vanoti hapana chavanoona chachinja muhupenyu hweveruzhinji mukati memuzuva zana VaMnangagwa vave mutungamiri wenyika.
VaChikohora vanoti rimwe dambudziko guru raVaMnangagwa inyaya yekuti vari kuti fambe dzoke serwaivhi.
Muongorori wezvemitemo yehupfumi anoshanda akazvimirira ega, VaButler Tambo, vanoti zvinonetsa kutaura kuti VaMnangagwa nemakurukota avo vabudirira zvakadii mukati memazuva zana vari muhurumende nekuti vakavimbisa kuti vanoda kugadzirisa zvakawanda asi veruzhinji havazive chaizvo chaizvo zvakapiwa gurukota rimwe nerimwe kuti riite.
Vanotiwo pari zvino pasi rose, kusanganisira vemabhizimisi, vangade kusima mari munyika, vakamirira kuona kuti nyika ichaita sarudzo dzakachena here kana kuti kwete.
Asi mukuru wesangano reAffirmative Action Group, VaReginald Shoko, vanoti VaMnangagwa vagona kuita basa ravo nemazvo kusvika pari zvino vachiti hurumende yavo yasiyana zvikuru neyaVaMugabe nekuti vanoteerera zvinenge zvataurwa neruzhinji.
Bepanhau rehurumende (which one?) rinotiwo VaMnangagwa nehurumende yavo vakwanisa kuita basa rinoyemurika mukati memazuva zana vapinda muhofisi.
Asi veruzhinji vacharamba vakaisa maziso avo pana VaMnangagwa nehrumende yavo, vachida kuona kuti vachakwanisa here kunyatsounza shanduko inovapa pundutso mukati memwedzi inotevera sarudzo dzisati dzaitwa munyika.